नेपालविरुद्ध बंगलादेश : साम्बाको स्थान कसले पाउला ? - Dainik Online Dainik Online
नेपालविरुद्ध बंगलादेश : साम्बाको स्थान कसले पाउला ?
प्रकाशित मिति : २४ भाद्र २०७८, बिहिबार २ : १६
काठमाडौं । आगामी एएफसी एसिया महिला कप २०२२ छनोट तयारी स्वरुप नेपालले बंगलादेशसँग दुई मैत्रीपूर्ण खेल खेल्दैछ । पहिलो खेल आज (बिहीबार) रहेको छ । त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रंगशालामा हुने पहिलो मैत्रीपूर्ण खेल साँझ ५ बजे सुरु हुनेछ । दोस्रो मैत्रीपूर्ण खेल आइतबार हुनेछ ।
बंगलादेशसँग खेल्दै गर्दा नेपाली टोलीको मुख्य हतियार सावित्रा भण्डारी (साम्बा) टोलीमा उपलब्ध हुने छैनन् । घुडाको एन्टेरिएल क्रुसियल लिगामेन्ट (एसीएल) च्यातिएपछि शल्यक्रिया गरेकी साम्बा टोलीमा हुने छैनन् ।
नेपाली राष्ट्रिय महिला टोलीबाट सर्वाधिक ३८ गोल गर्दै कीर्तिमान कायम गरेकी साम्बाको अनुपस्थितिमा नेपालको अग्रपंक्ति कमजोर देखिने आंकलन गरिएको छ । ‘पावर गेम’ र उत्कृष्ट ‘फिनिसर’ को रुपमा स्थापित भएकी सावित्राको अभावमा नेपालले बंगलादेशविरुद्ध खेल्दैछ ।
नेपालका मुख्य प्रशिक्षक फिलिप्सले बंगलादेश र एसिया कप छनोटका लागि २३ सदस्यीय टोली घोषणा गरेका छन् । जसमा ७ नयाँ अनुहारलाई स्थान दिइएको छ । प्रीति राई, सविता राना मगर, विमला विक, रजनी थोकर, रश्मी घिसिङ र सृजनासिंह ठकुरीले पहिलो पटक स्थान बनाएका हुन् ।
गत वर्ष पोखरामा भएको साग गेमयता नेपाली महिला टोलीले पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेल्दैछ । पोखरामा खेलेका स्ट्राइकर निरु थापा र डिफेण्डर मनमाया लिम्बुले सन्यास लिइ सकेका छन् । बाँकी समय आएका नयाँ खेलाडी र पुराना खेलाडीका कारण बंगलादेशविरुद्ध सुरुवाती ११ मा व्यापक परिवर्तन हुन सक्नेछ ।
यता, मिडफिल्डरमा भने विमला चौधरी, दिपा राई, रेणुका नगरकोटी, मन्जली कुमारी योञ्जन र अनिता बस्नेतको सम्भावना बढी छ । डेब्यु तयारीमा रहेकी सविता राना मगरकोसमेत उत्तिकै सम्भावना छ ।
बंगलादेशविरुद्ध अट्याकिङ मिडमा दिपा र मन्जली रहँदा होल्डिङ मिडफिल्डरमा कप्तान रेणुका रहने छिन् । यस्तै राइट विंगर तथा मिडफिल्डरमा सविता र लेफ्ट विंगर तथा मिडफिल्डरमा विमला चौधरीले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन् ।
डिफेन्स लाइनमा भने यसअघिका अनुभवी खेलाडी नै रहन सक्छन् । सदाबहार गीता रानासहित चोटबाट फर्किएकी हिरा भुजेल, अमृता जैशी, पुजा राना, पुनम जर्घा मगर , विमला विक लगायतका खेलाडीले खेल्न सक्छन् ।
प्रशिक्षक फिलिप्सले सेन्टर ब्याकमा गीता राना र अमृता जैशीलाई मौका दिने सम्भावना अत्याधिक छ । यस्तै राइट ब्याकमा पुजा रानाले स्थान बनाउँदा लेफ्ट ब्याकमा हिरा भुजेलको सम्भावना छ ।
यता, गोलकिपरमा भने एन्जिला तुम्बाप्पो सुब्बा रहेकी छन् । मैत्रीपूर्ण खेल भएका कारण आर्मीकी अन्जना राना मगरकोसमेत उत्तिकै सम्भावना हुन सक्छ ।
गोलरक्षकः अन्जना राना मगर, एन्जिला तुम्बाप्पो सुब्बा, उषा नाथ,
डिफेण्डरः अमृता जैशी, बिमल बिक, गिता राना, हिरा कुमारी भुजेल, निशा थोकर, पुजा राना, पुनम जर्घा मगर, इन्दिरा राइ, सृजना सिंह ठकुरी,
मिडफिल्डरः अनिता बस्नेत, दिपा राई, मन्जली कुमारी योञ्जन, प्रिती राई, रेनुका नगरकोटे, सविता राना मगर, बिमला चौधरी,
स्ट्राइकरः अनिता केसी, रजनी थोकर, रश्मि घिरिङ, सरु लिम्बु